/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Arnica Montana ntụ ntụ
Rating: Category: Ndị R & D mmeghachi omume
Arnica Montana ntụ ntụ na-egbu egbu mgbe a na-etinye ya n'ike zuru oke, mana enwere ike iji ya dị ka ude mmanụ, gel ma ọ bụ ude na akpụkpọ ahụ na-agbaji agbaji ma ọ bụ were ya n'ime mgbe ọ gbanyere ya n'ụlọ. Arnica toro ka ọ bụrụ otu n'ime ọgwụ ndị na-ewu ewu na homeopathic n'ụwa niile….
Enweghị ụkpụrụ Arnica Montana ntụ ntụ ma ọ bụ ụdị ọgwụ ọ bụla a na-atụ aro ya; enwere ọtụtụ ọgwụ dị iche iche maka ojiji dị iche iche. Ekwesịrị ibu ụzọ kpoo ọkachamara ahụike gị, yana ị kwesịrị ị na-agụ akara ngwaahịa ahụ nke ọma tupu iwere ihe ọ bụla.
Homeopathy bụ usoro ọgwụ nke sitere na ihe akpọrọ ụkpụrụ "dị ka ọgwụgwọ", nke a na-eji ihe na - akpata ihe mgbaàmà na ahụ ike (na obere doses) iji mesoo otu mgbaàmà ahụ onye oria. Ya mere, na homeopathy, ọgwụgwọ na-adị irè karị mgbe ha gbanwuru mmiri karị: 200C dị ike karịa usoro 6C.